Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fividianana hevitra YouTube?
Hatsarao ny laharan'ny milina fikarohana ny horonan-tsarinao
Mamporisika ny hafa hanome hevitra momba ny horonan-tsarinao
Mamporisika ny hanombohana dinika
Izahay dia mamerina mijery ny horonan-tsarinao ary manoratra fanamarihana kalitao
Azonao atao ny mandefa ny hevitrao manokana raha tianao kokoa
Niely nandritra ny andro maromaro ny fanehoan-kevitra
Fanamarihana Manomboka amin'ny 24-72 Ora
Ny fomba hividianana fanehoan-kevitra YouTube dia afaka manampy ny fantsonao ho lasa malaza kokoa
Amin'izao fotoana izao, YouTube dia heverina ho iray amin'ireo serivisy fampitana horonantsary be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Niaina fitomboana mihoa-pampana nandritra ny taona maro izy io ary lasa toerana tiany indrindra amin'ny fandefasana sy fijerena votoaty video. Mpampiasa maro izay afaka nanangona mpanaraka marobe no nahazo tombony amin'ny vola avy amin'izany. Noho izany dia tsy isalasalana fa ny YouTube dia manana tombony be dia be. Ity torolàlana manaraka ity dia hanampy anao amin'ny fananganana fantsona YouTube mahomby ary hahazo tombony bebe kokoa amin'izany.
Mba hananganana fantsona mahomby, ny dingana voalohany tokony hataonao dia ny fananganana tobin'ny mpihaino matanjaka. Ny mpihaino, izay fantatra amin'ny anarana hoe famandrihana ao amin'ny YouTube, dia hitondra fahitana bebe kokoa amin'ny fantsonao amin'ny alàlan'ny fankafizana ireo horonan-tsary, fanehoan-kevitra momba azy ireo ary fanondroana azy ireo amin'ny namany. Zava-dehibe ny fiarahana amin'ny mpanjifanao ary mihaino azy ireo raha tianao ho malaza ny fantsonao. Tena zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fantsonao ny fanehoan-kevitra. Ianao dia afaka mividy hevitra YouTube avy amin'ny YTpals ary ampiasao ireto paikady manaraka ireto mba hifandraisana amin'ireo mpanjifanao ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Inona no maha-zava-dehibe ny paikady fanehoan-kevitra mahomby?
Tsy natao hijerena horonan-tsary fotsiny ny YouTube, satria mamela ny olona hifanerasera amin'ny sehatra fanehoan-kevitra ihany koa. Ny fanehoan-kevitra dia fomba tsara ho an'ny mpamorona votoaty hifaneraserana amin'ny mpihaino azy ary ny mifamadika amin'izany. Izany dia ahafahan'ny mpamorona votoaty hihaino izay lazain'ny mpanjifany momba ny atiny. Ny fizarana fanehoan-kevitra ao amin'ny YouTube dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fananganana fifandraisana amin'ny mpihaino. Ny horonan-tsary misy fanehoan-kevitra bebe kokoa dia matetika mahazo fijery bebe kokoa. Hita fa ny ankamaroan'ny horonan-tsary misy fanehoan-kevitra manodidina ny 5,000 na mihoatra dia afaka mahazo fijerena manodidina ny 1 tapitrisa. Ny fijery sy ny fanehoan-kevitra dia mazàna mandeha miaraka, satria ny fitomboan'ny iray dia miteraka fitomboan'ny iray hafa.
Rehefa manomboka fantsona YouTube ianao, ny tanjona voalohany dia ny hampitombo ny fahitanao manerana ny lampihazo. Ny fanehoan-kevitra no hery manosika hampitombo ny fahitana. Ny fanehoan-kevitra dia afaka mitaona ny mpijery hijery ny horonan-tsary manontolo, hijery indray ilay horonan-tsary ary hizara izany amin'ny fianakaviany sy ny namany. Ny paikadin'ny fanehoan-kevitra mahomby dia tsy zava-dehibe fotsiny amin'ny fahazoana fomba fijery fa koa amin'ny fitarihana ny mpijery amin'ny votoatinao bebe kokoa. Ny paikady fanehoan-kevitra tsara dia ahafahanao manamafy ny hafatra tianao halefa amin'ny alàlan'ny fantsonao.
Paikady hitondrana fanehoan-kevitra bebe kokoa amin'ny horonan-tsary YouTube-nao
Mety ho tena ilaina ny fanehoan-kevitra raha te hahazo valiny mivantana avy amin'ny mpijery ianao ary mamorona resaka manodidina ny horonan-tsaryo. Ankehitriny rehefa azonao ny maha-zava-dehibe ny paikadin'ny fanehoan-kevitra mahomby, andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo fomba azo ampiasaina mba hitondrana fanehoan-kevitra bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo. Azonao atao ny mampiasa ny isan'ireo fomba ireo mba hamolavola ny paikadin'ny fanehoan-kevitrao manokana. Azonao atao ihany koa ny mividy fanehoan-kevitra YouTube hanampy amin'ity dingana ity.
1. Mametraha fanontaniana any amin’ny faran’ireo video.
Tokony hiezaka hametraka fanontaniana vitsivitsy avy amin'ny mpijery anao ianao amin'ny faran'ny horonan-tsary. Ireo fanontaniana ireo dia mety ho fanontaniana misokatra, na izany aza, fanontaniana manokana izay manosika ny mpijery haneho hevitra dia mety hahasoa anao kokoa amin'ity tranga ity. Raha video fampianarana ny anao dia azonao atao ny manontany ny mpijery raha hitany fa mahasoa ireo toro-hevitra ireo na tsia. Azonao atao ihany koa ny mampirisika ny firotsahana amin'ny alalan'ny fanontaniana ny mpijery momba ny karazana atiny tiany ho hita. Hahazo valiny azo antoka ianao ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra. Tsy vitan'ny hoe hahazo hevitra tsara ho an'ny horonan-tsary ho avy ianao, fa ho afaka hifandray amin'ireo mpanjifanao amin'ny sehatra manokana.
2. Ataovy ny fanehoan-kevitra voalohany ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra.
Indraindray, ny fomba tsara indrindra hamporisihana ny mpanaraka anao handefa fanehoan-kevitra bebe kokoa dia amin'ny alalan'ny tenanao manokana ny fanehoan-kevitra voalohany. Azonao atao ny mitarika sy mametraka fanehoan-kevitra izay mahasarika ny mpanjifa ary manomboka resaka momba ny video. Rehefa mandeha ny fotoana, dia ho mahazo aina kokoa ny mpanjifanao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny horonan-tsaryo. Fomba iray hafa hampiasana io tetika io ihany ny fangatahana olona iray fantatrao manokana hametraka fanehoan-kevitra. Ity paikady fanehoan-kevitra ity dia miasa tsara ihany koa. Ny fanehoan-kevitra navoakan'ny namana sy ny fianakaviana dia hamporisika ny mpanjifa handefa fanehoan-kevitra bebe kokoa. Amin'izany fomba izany dia afaka manangana vondrom-piarahamonina akaiky ianao izay mifandray amin'ny tsirairay isan'andro.
3. Jereo ny votoaty mahomby indrindra mba hahatakarana ny fifandraisana.
Azonao atao ny mampiasa analyse YouTube hamaritana hoe iza amin'ireo horonan-tsary no nahitam-bokany indrindra. Aorian'izay dia azonao atao ny manamarina ny antony mahatonga ny fifandraisana bebe kokoa. Na ny halavan'ny horonan-tsary na ny playlist sasany. Hita fa ny horonan-tsary fohy noho ny 2 minitra dia matetika mahazo taham-pirahalahiana lehibe kokoa amin'ny ankapobeny, raha oharina amin'ny horonan-tsary 5 minitra. Rehefa fantatrao ny antony mahatonga ny horonan-tsary ho tsara kokoa, azonao atao ny mamerina azy ireo amin'ny horonan-tsary vaovao. Izany dia hahatonga ny mpihaino hirotsaka an-tsehatra ary ho avy hatrany ny fanehoan-kevitra.
4. Mitazona fifaninanana amin'ny YouTube.
Sahala amin'ny fifaninanana Instagram sy Facebook, afaka manao fifaninanana ao amin'ny YouTube ihany koa ianao, hanentanana ny fandraisana anjara amin'ny fantsonao. Ny fifaninanana YouTube dia fomba tsara hahazoana fanehoan-kevitra, mpanjifa ary tia amin'ny horonan-tsaryo, miaraka amin'ny fotoana iray ihany. Na izany aza, mitaky vola fanampiny ianao ary tsy maintsy manao ezaka be ihany koa mba hampiroboroboana ny fifaninanana. Ny fifaninanana YouTube dia fomba tsara hisarihana ny saina amin'ny fantsonao, izay mety hiteraka fanehoan-kevitra bebe kokoa amin'ny horonan-tsarinao amin'ny farany. Azonao atao koa ny mamporisika ny mpijery anao hametraka fanehoan-kevitra ao anatin'ny fifaninanana.
5. Ampidino ny fanehoan-kevitry ny mpanjifa.
Azonao atao ny mifandray amin'ny mpanjifanao amin'ny sehatra manokana kokoa amin'ny alàlan'ny j'aime ny fanehoan-kevitra apetrany eo ambanin'ny horonan-tsaryo. Rehefa tia fanehoan-kevitra ianao dia hahita fo mena miaraka amin'ny kisary kely amin'ny fantsonao eo anilany ny mpijery. Hahazo fampandrenesana ihany koa ilay olona nandefa ny fanehoan-kevitra fa tiana ny fanehoan-keviny. Raha vao hitan'ny mpijery ianao mifanerasera amin'ny hafa amin'ny fanehoan-kevitra, dia hampirisihina izy ireo handefa fanehoan-kevitra bebe kokoa. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hanorina tsy fivadihan'ny mpankafy ianao ary hampiseho koa fa mankasitraka ny mpijery anao ianao.
6. Asio fanamarihana sasany.
Ny fametahana dia fomba tsara ahafahanao manasongadina fanehoan-kevitra sasany. Izy io dia miantoka fa ny fanehoan-kevitra voapetaka no fanehoan-kevitra voalohany hitan'ny mpijery eo ambanin'ny horonan-tsaryo rehefa midina ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra izy ireo. Azonao atao ny mametaka ny fanehoan-kevitrao manokana hanombohana resadresaka amin'ny mpijery na mametaka fanehoan-kevitry ny mpanjifa. Ny endri-javatra pinning dia tsara ho an'ny -
Mametraka fanontaniana manokana avy amin’ny mpanatrika.
Manome fanazavana momba ny vidéo.
Fanesoana ny mpanatrika amin'ny atody Paska na fivoarana manokana.
Misaotra ny mpijery nijery ny horonan-tsary.
Asongadino ny fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny mpanjifa.
Raha mijery ny iray amin'ireo fantsona tsara indrindra ao amin'ny YouTube ianao dia hahita zavatra iray mahazatra amin'izy ireo - tsy miovaova. Mba hahatonga ny fifaneraserana amin'ny fantsonao dia tsy maintsy manavao tsy tapaka ianao ary mamoaka horonan-tsary matetika. Zava-dehibe ny manaraka ny fandaharam-potoana hentitra mba hahafantaran'ny mpijery ny fotoana hampidiranao ny horonan-tsary manaraka. Na izany aza, midika izany fa tsy maintsy manodina votoaty ianao mba hahazoana izany. Na dia mandefa horonan-tsary iray isan-kerinandro aza ny fandaharam-potoananao, dia zava-dehibe ny hahatonga ny votoaty hahasarika ny mpihaino. Raha hitan'ny mpijery fa mahaliana sy miavaka ny horonan-tsarinao, dia hanohy handefa fanehoan-kevitra.
8. Ampidiro ny CTA
Zava-dehibe ny fampidirana antso ho amin'ny hetsika (CTA) isaky ny horonan-tsary. Izany dia azo ampidirina amin'ny ampahany amin'ny horonan-tsary, na ny fiandohana, ny afovoan'ny farany. Ny tanjon'ny CTA dia ny mangataka ny olona hisoratra anarana amin'ny fantsonao. Azonao atao ny mampiasa ny endri-panazavana ary mametraka boaty kely eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery, mangataka ny mpijery anao hisoratra anarana amin'ny fantsonao. Rehefa mahita ny CTA tsindraindray ny mpijery, dia hampahatsiahivana azy ireo hisoratra anarana amin'ny fantsonao. Rehefa mahazo mpanjifa ianao dia hitombo ho azy ny fanehoan-kevitra sy ny tia ho an'ny horonan-tsaryo.
9. Ampiasao ny Widget YouTube amin'ny blôginao sy ny tranokalanao
Ny fomba tsara iray hafa hitondrana ny fandraisana anjara amin'ny fantsona YouTube anao dia ny fametrahana widget YouTube ao amin'ny blôginao na tranokalanao. Ny Widget YouTube dia fomba tsara hampidirana mpanjifa vaovao satria ny mpanaraka ny blôginao sy ny mpitsidika tranokala dia hahafantatra ny fantsona YouTube anao. Raha manaraka ny atiny amin'ny haino aman-jery hafa izy ireo dia mety hisoratra anarana amin'ny fantsona YouTube anao koa. Izany, ho setrin'izany, dia hamela azy ireo handefa fanehoan-kevitra ao amin'ny fantsona YouTube-nao satria hanana fahafahana hifanerasera aminao amin'ny sehatra manokana izy ireo.
10. Manangana tambajotra
Raha tia ny fantsonao ny mpanjifa iray, dia mety ho tiany koa ny fantsona hafa mifandraika amin'izany. YouTube dia ahafahan'ny mpamorona manampy fantsona YouTubers hafa amin'ny pejy fanolorana. Toy izany koa, azonao atao ny mangataka fantsona hafa mifandraika amin'izany mba hampisehoana ny fantsonao amin'ny pejin'ny soso-kevitra mba ho voatosika ny mpijery azy hisoratra anarana amin'ny fantsonao. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hahazo fijery bebe kokoa ianao, mpanjifa ary fanehoan-kevitra ho an'ny fantsonao.
11. Mifandraisa amin'ireo mpanjifa.
Toa tetika miharihary izany, fa ny valin'ny fanehoan-kevitry ny mpanjifanao dia hisarika fanehoan-kevitra bebe kokoa. Rehefa mamaly ny fanehoan-kevitry ny mpijery ianao dia mampiseho ihany koa fa mihaino azy ireo ianao ary liana amin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo. Tokony haka minitra vitsivitsy isan'andro ianao hifaneraserana amin'ny mpijery. Ho fanampin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny fantsonao, mety tsara ny mifandray amin'ny mpijery amin'ny sehatra fanehoan-kevitry ny fantsona hafa mifandraika amin'izany ihany koa. Raha hitan'ireo mpijery ireo fa mahaliana ny fanehoan-kevitrao dia hiezaka ny hamaky ny mombamomba anao koa izy ireo. Amin'izany fomba izany dia afaka mahazo mpanjifa vaovao ianao.
12. Ampiasao amim-pahombiazana ny Keywords.
Ny fampiasana teny fanalahidy amin'ny horonan-tsary amin'ny fomba mahomby dia tena zava-dehibe raha te-hamosika ny fandraisana anjara tsara amin'ny fantsona YouTube ianao. Ny teny fanalahidy dia ampiasaina rehefa mikaroka zavatra manokana ny olona iray. Raha mampiasa teny fanalahidy mety ianao, dia mitombo ny mety hisian'ny horonan-tsary ho an'ny mpijery mety. Hita fa maherin'ny 60% amin'ireo mpanjifa vaovao amin'ny fantsona iray dia matetika avy amin'ny safidy fikarohana YouTube. Raha tsy mampiasa ny teny fanalahidy mety ianao na miparitaka manify ny tenimiafinao, dia mety tsy hiseho amin'ny valin'ny fikarohana ny horonan-tsarinao. Zava-dehibe ny famaritana araka izay azo atao rehefa mamorona tenifototra marika. Azonao atao koa ny mampiasa fitaovana an-tserasera mba hahitana soso-kevitra momba ny teny fanalahidy.
13. Fampiroboroboana ny fantsona.
Zava-dehibe ny fampiroboroboana ny fantsonanao tsy ao amin'ny YouTube ihany fa any ivelany koa. Hanokatra ny fantsona YouTube-nao ho an'ny mpijery avy amin'ny media samihafa izany. Rehefa manomboka manaraka ny votoatin'ny horonan-tsaryo izy ireo dia hanomboka haneho hevitra, hizara ary hankafy ny horonan-tsaryo koa izy ireo. Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo fomba ahafahanao mivarotra ny fantsona YouTube anao -
Ampifandraiso amin'ny pejin'ny media sosialy ny fantsona YouTube anao.
Alefaso amin'ny tranokalan'ny tsoratadidy sosialy ny fantsona YouTube.
Ampio amin'ny milina fikarohana video ny fantsona.
Ampifandraiso amin'ny lisitry ny mailaka ny rohy mankany amin'ny fantsona YouTube anao.
Ampiasao ny URL YouTube anao rehefa mandefa fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy sy ny toy izany.
14. Mampiasà thumbnail mahaliana ho an'ny atiny video
Raha te hisarihana mpanjifa vaovao ianao dia zava-dehibe ny hisongadina ny thumbnails. Azon'ny olona kitihina kokoa ny videonao raha hitany fa manitikitika ilay thumbnail. Na izany aza, tsy midika izany fa manomboka mampiasa sary clickbait ho toy ny thumbnail ianao. Tsy azo inoana fa hanaraka ny fantsonao ny mpijery raha mampiasa ny paikadin'ny clickbait ianao. Ny tanjona lehibe amin'ny fampidirana thumbnail mahaliana dia ny hampitombo ny fijery azonao. Raha afaka manome votoaty tsara ho an'ny mpijery ianao dia hitondra fanehoan-kevitra sy tia koa ny fomba fijery.
15. Ampiasao ny endri-javatra vaovao amin'ny fanivanana ny hevitrao
Ny endri-javatra vaovao ao amin'ny YouTube Studio (desktop) dia ahafahanao manivana ny fanehoan-kevitra ao amin'ny fantsonao. Azonao atao ny mampiasa izany hitadiavana fanehoan-kevitra manokana sy hanatsara ny fikarohana, mifototra amin'ny -
Toetran'ny mpikambana ao amin'ny fantsona.
Ny laharan'ny famandrihana ny mpaneho hevitra.
Azonao atao koa ny mampiasa ny sivana hijerena fanehoan-kevitra izay manana fanontaniana manokana mba hahafahanao mamaly azy ireo mora kokoa. Ho fanampin'izany dia azonao ampiasaina ity fampiasa ity handinihana ny fanehoan-kevitrao na tsy voavalinao.
Farany, afaka mividy fanehoan-kevitra YouTube amin'ny YTpals ianao. Ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube dia mety ho safidy tsara ho an'ireo izay vao nanomboka ny diany YouTube, satria ny mpijery sasany dia mety misalasala mandefa fanehoan-kevitra amin'ny lahatsary tsy misy fanehoan-kevitra. Safidy tsara ho an'ny kaonty efa voaorina ihany koa izany, rehefa mampiasa ireo paikady voalaza etsy ambony ianao ary mividy fanehoan-kevitra YouTube hanampy anao amin'ny dingana.
Nahoana ianao no tokony hividy fanehoan-kevitra YouTube?
Ankehitriny rehefa fantatrao ny paikady hampitomboana ny isan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny fantsonao, fotoana izao hijerena ny maha-zava-dehibe ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube. Misy fifaninanana mahery vaika eo amin'ny tontolon'ny media sosialy ankehitriny, ary nanjary sarotra ny fahazoana laza amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy toy ny YouTube. Izany dia satria maro amin'ireo olo-malaza efa miorina tsara no mitodika any amin'ny sehatra toa ny YouTube mba hamoronana votoaty. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanatsarana ny paikady sy ny fitadiavana fomba vaovao handroahana ny firotsahan'ny mpanaraka.
Raha ianao mividy hevitra YouTube avy amin'ny mpanome tolotra toa an'i YTpals, dia ho afaka hampitombo ny fahombiazan'ny fantsonao ianao. Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo tombony amin'ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube.
1. Ampitomboy ny fankasitrahana ny horonan-tsaryo.
Afaka mahazo tombontsoa isan-karazany amin'ny YouTube ianao rehefa avy nahazo fankasitrahana avy amin'ny mpijery. Rehefa mividy fanehoan-kevitra YouTube ianao dia mitombo ny mety ho fantatry ny horonan-tsaryo. Raha te hahomby amin'ny YouTube ianao dia mila mahazo mpanjifa, tia, ary fanehoan-kevitra ampy ny horonan-tsarinao. Ny fividianana ny fanehoan-kevitra dia manamora ny asa, satria ny fanehoan-kevitra bebe kokoa dia mitondra fijery sy tia bebe kokoa. Na dia mety tsy hitovy amin'ny haben'ny fanehoan-kevitra azon'ireo olo-malaza ao amin'ny YouTube aza ny horonan-tsarinao, ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube dia azo antoka fa mampitombo ny fankasitrahana ny fantsonao eo imason'ny mpijery.
2. Ampitomboy ny laharan'ny fantsona YouTube-nao
Ao amin'ny YouTube, ny laharan'ny fantsona dia matetika no faritana amin'ny isan'ny mpanjifa ananan'ny fantsona. Ny mpanjifa dia mety miovaova arakaraka ny isan'ny fanehoan-kevitra sy ny tiany amin'ny horonan-tsary tsirairay. Izany no mahatonga ny fitomboan'ny isan'ny tia sy ny fanehoan-kevitra mitarika amin'ny fisondrotry ny laharan'ny fantsona ao amin'ny YouTube. Izany dia manondro ny zava-misy fa ny fanehoan-kevitra dia tena zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fantsona YouTube. Rehefa mividy fanehoan-kevitra YouTube ianao dia azonao atao ny mampitombo ny laharan'ny fantsonao amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny vintana hahazoana mpanjifa bebe kokoa.
3. Ataovy viraliny ny horonan-tsarinao
Tian'ny YouTuber ho lasa viraliny ny votoatiny, na izany aza, tsy misy lamina napetraka hanatrarana izany. Mba hamoronana votoaty virtoaly dia tsy maintsy mandany fotoana be ny mpamorona iray ary mampiroborobo azy amin'ny media samihafa mba hamoronana tabataba manodidina ilay horonan-tsary. Na dia tsy misy fomba azo antoka hiparitaka aza, ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube dia azo antoka fa manampy amin'ny dingana. Rehefa mividy fanehoan-kevitra YouTube ianao, dia hasongadina amin'ny olona maro kokoa ny horonan-tsarinao. Rehefa mihamaro ny olona manindry ny horonan-tsarinao dia betsaka ny fanehoan-kevitra hirotsaka. Ny fizarana fanehoan-kevitra no zavatra voalohany hojeren'ny mpijery, na dia alohan'ny hisoratra anarana amin'ny fantsona aza. Noho izany ny fananana fizarana fanehoan-kevitra manaitra amin'ny fividianana fanehoan-kevitra dia hanampy anao amin'ny fisarihana mpijery bebe kokoa.
4. Mahazoa kitika sy j'aime bebe kokoa
Raha tianao hanjary malaza ao amin'ny YouTube ny fantsonao, dia zava-dehibe ny hahazoanao kitika, fanehoan-kevitra ary tia. Mety ho lava sy mandreraka ny fizotran'ny fitazonana ny olona hijery ny horonan-tsaryo. Na izany aza, misy fomba azonao atao ny manitsy ny dingana. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanombohana ny lazanao dia ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube. Vantany vao mividy fanehoan-kevitra ao amin'ny YouTube ianao dia hirotsaka ho azy ny fijery sy ny tia rehefa mihamaro ny olona manomboka manindry ny videonao. Izany dia satria betsaka ny fanehoan-kevitra ao amin'ny horonan-tsaryo dia mampitombo ny mety hisehoan'izy ireo amin'ny valin'ny fikarohana.
5. Manintona mpanjifa vaovao
Ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny YouTube dia ny mpijery sy ny mpanjifa. Ny paikadinao rehetra dia mikendry ny hisarihana mpijery bebe kokoa amin'ny fantsonao. Zava-misy fanta-daza fa ny isan'ny mpijery sy ny mpanjifa betsaka ao amin'ny fantsonao, dia ny mpijery betsaka kokoa ho azonao. Ny isan'ny fanehoan-kevitra amin'ny horonan-tsaryo koa dia mamaritra ny isan'ny fijerena ho azonao. Ny fividianana fanehoan-kevitra avy amin'ny YTpals dia afaka manampy amin'ity dingana ity ary afaka manamora ny asanao izany. Ho afaka hisarihana mpanjifa vaovao ianao satria ireo mpijery mitsidika ny fantsonao dia manamarika ny isan'ny fanehoan-kevitra efa anananao ao amin'ny fantsonao.
6. Manampy amin'ny famoronana porofo ara-tsosialy
Ny porofo ara-tsosialy dia tena zava-dehibe amin'ny tontolon'ny media sosialy. Fanta-daza fa mazàna ny olona dia mihaino ny fantsona manana toerana ara-tsosialy. Rehefa betsaka ny mpijery matoky ny foto-kevitra na ny hevitra aparitaka amin'ny fantsona YouTube-nao, dia hirotsaka ho azy ireo mpijery vaovao. Noho ny porofo ara-tsosialy, ireo mpijery vaovao ireo dia mirona kokoa hanitarana ny fanohanany ny fantsona. Afaka mividy fanehoan-kevitra YouTube ianao mba hamoronana porofo ara-tsosialy amin'ny tranokala. Raha vao hitan'ny mpijery ny fanehoan-kevitra ao amin'ny horonan-tsaryo dia ho liana amin'ny fijerena bebe kokoa amin'ny atiny izy ireo.
7. Esory ny fanehoan-kevitra ratsy
Matetika, ny olona dia mety hiafara amin'ny famoahana fanehoan-kevitra ratsy sy feno fankahalana amin'ny lahatsary YouTube izay tsy misy ifandraisany amin'ny atiny. Olona maro no mampiasa YouTube mba hampiroboroboana ny fankahalana sy ny fitsarana an-tendrony. Eto no tena ilaina ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube. Azonao atao ny mitatitra ireo fanehoan-kevitra ireo, na izany aza, azonao atao koa ny mampiasa tetika hafa hanalana ny tabataba. Rehefa mividy fanehoan-kevitra YouTube ianao dia azonao antoka fa manaloka ireo fanehoan-kevitra ratsy ireo ny fanehoan-kevitra miabo, izay mety hanimba ny horonan-tsarinao amin'ny farany. Paikady lehibe ity amin'ny fitazonana ny trolls amin'ny Internet ary tsy ho afaka hahazo fahafaham-po amin'ny fanehoan-kevitra feno fankahalana izy ireo.
8. Mamorona clout eo amin'ny lampihazo
Rehefa mividy fanehoan-kevitra YouTube ianao dia hanomboka hahazo fankasitrahana eo amin'ny lampihazo ny horonan-tsarinao. Rehefa mihamaro ny olona manomboka mijery ny horonan-tsarinao dia ahafahanao manamafy ny toeranao eo amin'ny habaka. Ny isa betsaka kokoa dia midika ho tia bebe kokoa, fanehoan-kevitra bebe kokoa ary mpanjifa bebe kokoa. Ary miaraka amin'ny mpanjifa sy fanehoan-kevitra bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo, ny mpijery fanampiny dia hampirisihina hisoratra anarana amin'ny atiny sy handefa fanehoan-kevitra. Hitohy ity tsingerina ity ary ho afaka hahatratra ny haavony ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Vokatr'izany dia ho afaka hampihatra hery kely eo amin'ny lampihazo ianao. Tsy vitan'ny hoe hahazo tombony amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny YouTube ianao, fa hanampy anao amin'ny fananganana fiaraha-miasa vaovao sy hikaroka ireo lalana fanampiny.
9. Mamorona fitomboana mifandanja amin'ny fanehoan-kevitra sy fomba fijery
Raha nividy fijerena YouTube avy amin'ny YTpals ianao taloha, dia mety koa ny mividy fanehoan-kevitra YouTube. Rehefa mijery ny fantsonao ny olona, ​​dia mety hamela fanehoan-kevitra sasantsasany ny sasany amin'izy ireo. Tsy hita taratra tsara amin'ny fantsonao izany raha toa ka miala amin'ny sisiny lehibe ny tahan'ny hevitra sy ny fanehoan-kevitra. Azonao atao ny mamaha ity toe-javatra ity amin'ny alàlan'ny fividianana fanehoan-kevitra YouTube mifanaraka amin'ny isan'ny fijerinao amin'ny horonan-tsaryo. Satria toa marina kokoa ny fomba fijerinao sy ny fanehoan-kevitrao, dia hampirisihina ny olona hanaraka ny fantsonao ary hametraka fanehoan-kevitra sy tia amin'ireo horonan-tsary.
10. Mahazo fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao manokana
Azonao atao ny mampiasa ny fahombiazan'ny fantsona YouTube anao mba hitondrana fifamoivoizana amin'ny tranokalanao manokana. Rehefa mividy fanehoan-kevitra YouTube amin'ny loharano azo itokisana toa an'i YTpals ianao, dia omena fa afaka mahazo tia, fijery ary mpanjifa bebe kokoa ianao. Rehefa mitombo ny isan'ny mpanjifanao dia azonao ampiasaina ny fitaomanao amin'ny tranokala hampiroboroboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Ny fantsona YouTube anao dia ahafahanao mikendry olona liana amin'ny karazana atiny vokarinao.
Avy amin'ireo paik'ady voalaza teo aloha amin'ny fitarihana fanehoan-kevitra ao amin'ny horonan-tsarinao YouTube, dia hita mazava tsara ny maha-zava-dehibe ny fanehoan-kevitra ao amin'ny habaka YouTube. Raha vaovao amin'ny sehatra ianao ary sahirana amin'ny fanaovana sokitra ho an'ny tenanao, dia afaka mahazo tombony amin'ny serivisy Buy YouTube Comments an'ny YTpals ianao. Rehefa mividy fanehoan-kevitra YouTube amin'ny loharano azo itokisana toa an'i YTpals ianao dia ho azonao ny tombontsoa rehetra voalaza etsy ambony. YTpals dia mijery ny horonan-tsaryo ary manoratra fanehoan-kevitra tena izy. Manana safidy handefa ny hevitrao manokana koa ianao. Ny serivisy dia hanomboka ao anatin'ny 24-72 ora aorian'ny fametrahana ny baiko, ary hiparitaka mandritra ny andro maromaro ny fanehoan-kevitra.
YTpals dia manome serivisy premium isan-karazany mba hahomby kokoa ny fantsona YouTube anao. Raha te hahalala bebe kokoa, Mifandraisa aminay amin'izao andro izao!
Nampidirina anaty sarety anao ny tsikera YouTube.
1000 Views ($ 20)5000 Views ($ 60)10000 Views ($ 100)25000 Views ($ 200)50000 Views ($ 350)100000 Views ($ 600)
100 Mizara ($ 10)250 Mizara ($ 20)500 Mizara ($ 30)1000 Mizara ($ 50)2000 Mizara ($ 80)5000 Mizara ($ 130)10000 Mizara ($ 250)